မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ: မြင်းမိုရ် ဖြိုတဲ့လက် မဖြစ်စေချင်
မြင်းမိုရ် ဖြိုတဲ့လက် မဖြစ်စေချင်
မိဘကျေးဇူး မြင်းမိုရ်ဦး၊ မြင်းမိုရ်ထက်မြင့်သော အစရှိသည်တို့ဖြင့် မိဘတို့၏ကျေးဇူးကို ပုံပမာ တင်ကြသည်။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝ ဖဝါးလက်နှစ်လုံး ပခုံးလက်နှစ်သစ် လူရယ်လို့စမဖြစ်ခင် အချိန် အမိဝမ်းတွင်းမှာပင် မိခင်တို့သည် မိမိတို့၏ ကလေးငယ်တို့အတွက် အစားသောက် အနေအထိုင်မှ အစ လိုက်နာရမည်များကို မိမိနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ လိုက်နာ၍ ရှောင်ကျဉ်ရမည့် အရာများကိုလည်း မည်မျှပင် နှစ်သက်မက်မောစေကာမူ ရှောင်ကျဉ်ခဲ့သည်။ ရင်သွေးငယ်တို့ကို လွယ်ပိုးဖူးသော မိခင်ဟူသမျှသည် ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့၏ သားသမီးများအပေါ်တွင် ကာကွယ်လိုစိတ်၊ စောင့်ရှောက်လုိုစိတ်လည်းရှိကြသည်သာ ဖြစ်သည်။
လူသားတိုင်းတွင် မွေးမိခင်နှင့်မွေးဖခင်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီသာရှိသည်။ မိမိတို့ လူသားအဖြစ်သို့မရောက်ခင်ကတည်းက ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သော မိခင်တို့သည် ငွေကြေးအားဖြင့်လည်း ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပေ။ ဆုံးရှုံးသွားလျှင်လည်း အစားထိုးရာအဖြစ် မည်ကဲ့သို့မျှ မရနိုင်သောသူများတွင် မိဘသည် အရှေ့ဆုံးမှ ပါဝင်သည်။ ငွေကြေး၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာ နှင့် ဥစ္စာဓန ကို အကြောင်းပြု၍ မိမိ ၏ မိခင်ကို စွန့်ပစ်ခြင်းမှာမူ ဘာသာတရား အရတွင်သာမဟုတ် လူမှုယဉ်ကျေးမှုအရပါ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်သော အကြောင်းအရာသာ ဖြစ်သည်။
ယခု ပြောပြလိုသော အကြောင်းအရာသည် သြစတြေးလျားနိုင်ငံတွင် မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြောင်းအရာကလေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။
သားတစ်ယောက်သည် လွန်ခဲ့သော တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်က အိမ်တစ်ဆောင်ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထိုအိမ်သည် သူ၏ပထမဆုံး ဝယ်ယူသော(First Home) အိမ်မဟုတ်ပေ။ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု (Investment Property) အဖြစ်ဝယ်ယူထားသော အိမ်တစ်ဆောင်သာဖြစ်သည်။ ထိုအိမ်တွင် သူ၏မိခင်ဖြစ်သူကို အိမ်ငှားအဖြစ် ပြန်လည်ငှားရမ်းထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ ငှားရမ်းရာတွင်လည်း မိခင်နှင့်သား မေတ္တာအရ မိသားစုဝင် မိခင်တစ်ယောက်အဖြစ် နေထိုင်စေခြင်းမဟုတ်ပဲ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ တဆင့် မိခင်ကို ပြန်လည် ငှားရမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် မိခင်သည် သားဖြစ်သူအား ထိုက်တန်သော အိမ်ငှားခကို ပေးရသည်။
ထိုကဲ့သို့ အိမ်ငှားအဖြစ် သားဖြစ်သူ၏အိမ်တွင် နှစ်ပေါင်း ၁၅နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် မိခင်ကြီးသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဝင်ငွေလည်း လျော့နည်းလာကာ ပြည့်ဝသော ငှားရမ်းခ ငွေကို ပေးဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပေ။ ထိုအခါ သားဖြစ်သူသည် အမေအိုအား မိခင်အဖြစ် မကြည့်နိုင်ပဲ ငှားရမ်းခငွေ အပြည့်ကိုသာ လိုချင်ခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ဝက်နီးပါးအကြာတွင် မိခင်ပေးဆောင်သော မပြည့်ဝသည့်ငှား ရမ်းခငွေကို သည်းခံခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ပဲ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ တစ်ဆင့် မိခင်ကြီးအား အိမ်ပေါ်မှဖယ်ပေးရန် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
မိခင်ဖြစ်သူမှာလည်း သူမ၏သားသည် သူမအား ဤသို့ မပြုတန်ဟုထင်ပြီး အိမ်ပေါ်မှ ဖယ်မပေးခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် သူမ၌ အခြား နေစရာ သွားစရာလည်းမရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့ အိမ်ပေါ်မှ မဆင်းပေးသောအခါ သားဖြစ်သူနှင့် အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှလူများသည် ရဲသို့ အကြောင်းကြား၍ မိခင်ကြီးအား အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းစေရန်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ သူမပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကိုလည်း အိမ်ပေါ်မှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သည်လည်း သားနှင့်မိခင် ကြားမှ ရှိသော ကတိကဝတ် စာချုပ်များအရ မည်ကဲ့သို့မျှ မတတ်နိုင်ပဲ ဥပဒေအတိုင်သာ မိခင်ကို အိမ်ပေါ်မှ ဖယ်ပေးရန်တွန်းအားပေး ဆင်းစေခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် မိခင်ဖြစ်သူသည် မည်ကဲ့သို့မျှ မတတ်နိုင်ပဲ သူမပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းတို့ကို သူမ၏ကားအဟောင်းကလေးထဲတွင် ထည့်၍ သူမ ၁၆နှစ်နီးပါးနေခဲ့သော အိမ်ကလေးကို မျက်ရည်ပြည့်နေသော မျက်ဝန်းများဖြင့်ကြည့်ကာ နာကျင်စွာဖြင့် ကျောခိုင်း ထွက်ခွါသွားခဲ့သည်။
ဤအကြောင်းအရာတွင် သားနှင့် မိခင်ကြားတွင် အိမ်ငှားရမ်းခ မပြည့်ဝသည့် အကြောင်းသာမက အခြားအကြောင်းချင်းရာလည်း ရှိကောင်းရှိပေမည်။ သားသည်မိမိဝယ်ယူထားသော အိမ်အတွက် Home Loan ပေးဆောင်ရန် မတတ်နိုင်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့မဟုတ် ထိုအိမ်ထက် ကောင်းမွန်သော အိမ်ကိုဝယ်ယူချင်သောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ဆန္ဒရှိပါလျှင် မိမိ၏ မိခင်ကို မိမိနေထိုင်ရာအိမ်တွင် ခေါ်ယူထားနိုင်ပေသည်။
သြစတြေးလျားနိုင်ငံ၏စံအရ ၀င်ငွေနည်းပါးသော မိသားစုများတွင် ကလေးသူငယ်များအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ကြေးငွေကို ကလေးငယ် အသက် ၁၈နှစ်ရောက်သည် အထိ ပေးထားလေ့ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်မှ ကလေးငယ်များအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းသည် ငွေကြေးအားဖြင့် ထောက်ပံ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အနှီကလေးငယ် နေမကောင်းလျှင်ဖြစ်စေ၊ မကျန်မာလျှင်ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးပြဿနာ ရှိလာလျှင်ဖြစ်စေ မိခင် ဖခင်တို့ကသာ ဖြေရှင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ရသည်သာတည်း။ “ ငါတို့ကို နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ ပေးကျွေးထားတယ်၊ ငါတို့က ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ် နေကြတယ်” ဟူသော အတွေများသည် ကလေးငယ် အတော်များများစိတ်တွင် ရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် မိခင် ဖခင်တို့အပေါ်တွင် ရိုသေလေးစားမှု နည်းပါးကြသည်။ ဆိုဆုံးမလျှင်ပင် လက်မခံ နားမထောင်ပဲ နေကြသောသူများသည် ဝင်ငွေနည်းပါးသော မိသားစု တော်တော်များများတွင် တွေ့မြင်နေကြရသည်။
နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ခြင်းသည် ကလေးသူငယ်များ ရိုင်းစိုင်းစိတ်ဝင်ရန် မဟုတ်ပေ။ ကလေးသူငယ်တိုင်း လူတန်းစေ့ တန်တူနေထိုင်နိုင်ပြီး သိမ်ငယ်စိတ်မဝင်စေရန်၊ စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် မြင့်စေရန်သာဖြစ်သည်။ သုို့ရာတွင် အများစုသည် ထိုကဲ့သို့ အသိမျိုးမဝင်ပဲ “ မိဘများသည် ငါတို့ကိုထောက်ပံ့တဲ့ငွေကြေးကို ဝိုင်းဝန်းသုံးစွဲနေသည်” ဟူသော လွဲမှားသည့် မာနနှုင့် အယူအဆဆိုးများကိုသာ လက်ခံထားကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ အယူအဆများကို လက်တွင်စွဲကိုင်ထားသော ကလေးသူငယ်များ ကြီးပြင်းလာသောအခါ မိခင်၊ ဖခင်တို့မည်သည် မြတ်နိုးစရာ၊ ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားရသော သူများအဖြစ် မမြင်နိုင်ကြတော့ပေ။ ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်ရာနောက်လိုက်ကာ မိခင်အို၊ ဖခင်အိုတို့အား ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းအမှုတို့ကို ကျောခိုင်း၍ မိမိတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို အထိပါးမခံပဲ မိခင်ဖခင်တို့ကို မျက်ကွယ်ပြုကြလေသည်။ ထိုအခါ မည်သို့မျှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြတော့သော အမယ်အို၊ အဘအိုတို့သည် ဘိုးဘွားရိပ်သာများသို့ ရောက်ရှိကာ သူတို့၏ နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်တို့ကို အထီးကျန် အဖော်မဲ့စွာ၊ နာကျင်စွာ၊ ကြေကွဲစွာဖြင့် ဖြတ်သန်းကြရလေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်အိုမင်းလာလျှင် ထိုကဲ့သို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးအချိန်ကို ကုန်ဆုံးချင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိဘများကို မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသင့်ကြပေသည်။
ဘဘ ဦးသုခ ပြောခဲ့သလိုပေါ့ အမေဟာ အမေပါဘဲ... ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ပြီး အသိသံဝေဂလဲရမိတယ်... ဘယ်လောက်ဘဲ အောင်မြင်နေ အောင်မြင်နေ မိဘကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့သားက သားမိုက်ပါဘဲ... ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ် အစ်မရေ...
my husband and i are looking to buyahouse in next couple months and we are wanting to apply for home loans atacouple different places but
not if it is going to count against our credit. is there anyway that we can just see what kind of loan and payments we could get without it
counting against us? which places are the best to go to?
. i just want to see what kind of loan and rates we can get right now without any commitment and then choose
the best one for us later..
သံဝေဂ ရစရာ ပိုစ်လေးဖြစ်သလို၊ အသိတရားလည်း အများကြီးရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လောကမှာ အစားထိုးစရာ မရှိတာ မိဘ ပါပဲ။ တိုးတက်မှု့တွေထဲက ဆုတ်ယုတ်မှု့ တစ်ခုပေါ့လေ..
ရင်ကို ထိတယ် အစ်မရာ။ အမေကို တက္ကစီခ အတင်းတောင်းတဲ့ သားအကြောင်းလား ဘာလား တစ်ခါ ကြားမိပါသေးတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ။ ခေတ်က ပျက်လာခဲ့ပြီကိုဗျာ။
တော်တော် ဆိုးဝါးတဲ့ အယူအဆတွေပဲဗျာ ... ။ မိဘကျေးဇူးဆိုတာက ဆပ်လို့ ကုန်နိူင်တဲ့ အရာ မျိုး မဟုတ်ပါဘူး ... ။ ဘယ်လို ခေတ်စနစ် တွေ ၊ ဘယ်လို ဥပဒေသတွေ ပဲ ရှိရှိပေါ့ ...